थाहा खबर: पाँच वर्षसम्म देश ओली र प्रचण्डले चलाउने हो, आधाआधा होइन : नेम्वाङ
पाँच वर्षसम्म देश ओली र प्रचण्डले चलाउने हो, आधाआधा होइन : नेम्वाङ
काठमाडौं : राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशको विषयमा अहिले प्रमुख दलहरुको धारणा विभाजित छ। नेपाली कांग्रेसले उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि राष्ट्रियसभाको समेत चुनाव गरेर सरकार छोड्ने बताएको छ। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले भने नयाँ सरकार गठनको बाटो खोलिदिनुपर्ने भनाइ राख्दै आएका छन्। यो अवरोध कायमै रहँदा पार्टी एकता गर्नेसम्मको तयारीमा रहेका एमाले र माओवादीबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको चर्चाले नेपाली राजनीतिमा अर्को तरंग पैदा गरिदिएको छ। दलहरुबीचको विवाद र सहमतिको सम्भावना, एमाले-माओवादीबीचको पार्टी एकता र नयाँ सरकार गठनको विषयमा नेकपा एमालेका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग रेडियो थाहासंचारका लागि नरेन्द्र सापकोटाले गरेको कुराकानी :
राष्ट्रियसभा गठनबारे त हामीले एउटा कुरा भनेका भन्यै छौं। एउटा कुरा म सम्झना दिलाउन चाहन्छु। राष्ट्रियसभामा सामान्य बहुमतबाट अगाडि बढ्ने हो भनेर विधेयक पेश गरिएको थियो संसदमा। एकचोटी पल्टाएर हेरौं, यसलाई मन्त्रिपरिषदले पनि पास गरेको छ, अनि संसदमा पेश भएको छ। त्यसभन्दा पहिला निर्वाचन आयोगमा छलफल भएको थियो। राष्ट्रियसभा बहुमतबाट गर्ने भन्ने निर्वाचन आयोगमा सर्वसम्मति भयो। अनि निर्वाचन आयोगबाट तयार भएको विधेयकलाई सरकारले संसदमा प्रस्तुत गर्‍यो। अहिले पनि त्यो विधेयक छ, हेरौं त त्यसमा के छ? अनि अहिले स्थानीय तहको परिणाम आएपछि सत्तापक्षले नै विधेयक परिवर्तन गर्न खोज्दा विवाद उत्पन्न भएको हो।
त्यसैले हामीले हाम्रो भनाइ अनुसार भनेका छैनौं। सरकारले त्यतिबेला सर्वसम्मतिमा पेश गरेको विधेयकबाट पछाडि फर्केर हामीसँग छलफल नगरीकन किन उल्टो अध्यादेश प्रस्तुत गर्‍यो? हाम्रो प्रश्न यत्ती हो।
यो राष्ट्रियसभाको निर्वाचन एकल संक्रमणीय हुँदैन भनेर संविधानमा नै लेखिएको छ। २०४७ सालकोमा एकल संक्रमणीय मतको आधारमा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुन्छ भनेर लेखिएको छ। अहिलेको संविधानमा एकल संक्रमणीय भनेर लेखिएको छैन। संघीय कानुन बमोजिम निर्वाचन गरिनेछ मात्रै लेखिएको छ।
एकल संक्रमणीय राखौं भनेर त्यतिबेला नै कुरा उठेको हो। तर एकल संक्रमणीय राख्नु हुदैन भनेर प्रमुख तीनवटै दल सहमत भएका हुन्। संविधान निर्माणको प्रक्रियामा। अहिले अचानक यो किन उत्पन्न भयो?
हामीले यत्ती मात्रै भनेका हौं, प्रमुख प्रतिपक्षका नाताले राज्यले सबै कुराको जानकारी हामीलाई पनि गराओस्। हामी पनि हाम्रो राय सुझाव दिन्छौं। हामी सहयोग गर्छौं। प्रमुख प्रतिपक्षको नाताले हाम्रो पनि कुरा सुनिनुपर्छ, हामी पनि सहयोग गर्छौं भन्नु दम्भ हो? यो देशमा एउटा प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुसार काम हुनुपर्छ भन्नु दम्भ हो? अब त्यही कुरा प्रमुख प्रतिपक्षका नाताले कांग्रेससँग राज्यले व्यवहार गर्नुपर्छ कि पर्दैन? हामीले त प्रणालीको कुरा गरिरहेका छौं। त्यसो भन्दा दम्भ हुन्छ?
जहाँसम्म एकल संक्रमणीयको पक्षमा अरु सबै छन् भन्नुभयो त्यो होइन। हामी त संविधान अनुसार जाऔं भनिरहेका छौं। जुन संविधान हामी सबै मिलेर बनाएका हौं। यसमा माओवादीको पनि अलि दमित स्वर छ,तर त्यसो होइन। हाम्रै एमालेका पक्षधरहरुले बोलेको सुन्नुस् न, कोही अलि कडा शब्द प्रयोग गर्छन्। मेरो शब्द त्यस्तो छैन। त्यसकारण माओवादी एकदम प्रष्ट छ। हामी हिजो पनि दुईपक्ष बसेका छौं।
(हाँस्दै) तपाईहरुसमक्ष एउटा कुरा के राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि, जनताको जनादेश प्राप्त भएर नयाँ प्रधानमन्त्री नआउन्जेलसम्म सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएको कामचलाउ सरकार हो यो। नयाँ जनादेश प्राप्त गरेर नयाँ संसदीय दल अगाडि प्रस्तुत भइसकेपछि अब यो काम गर्छु म त्यति काम गरुन्जेल पर्ख भन्नु ठीक हो?
अहिलेसम्म प्रष्टै शब्दमा यो काम सिद्धिएपछि मात्रै म राजिनामा गर्छु भनेर सोझै भन्नुभएको छैन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीजीमाथि किन यो दोष थोपर्ने? अहिले यत्ती मात्रै भन्छु यो निर्वाचनको परिणाम तुरुन्तै निकाल्नुपर्‍यो। त्यो हाम्रो अधिकार हो। जनताको अधिकार हो। त्यसको बारेमा राष्ट्रपतिलाई परिणाम पेश गर्नुपर्‍यो निर्वाचन आयोगले। त्यसपछि हामी सरकार निर्माणका लागि अगाडि बढ्छौं।
प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकको परिणाम निकालौं। निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम पूरा गर्दै संविधान बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष पेश गरोस्। यो प्रक्रियामा पनि जाऔं र छलफल पनि गरौं। छलफल गरौं भन्ने त माग नै हाम्रो हो।
यो सरकार अहिले नियुक्ति लगायतका विभिन्न ठाउँमा किन लागिरहेको छ? गर्नै नपर्ने काम। गर्नुपर्ने काम गरोस् न। त्यो भनेको प्रमजीले दलहरुलाई बोलाएर छलफल गर्नुहोस् न! राष्ट्रियसभामा अड्कियो, अध्यादेशमा अड्कियो, यो ठाउँमा विवाद भयो, दलहरूको बीचमा तिक्तता भयो छलफल गरौं भनेर भन्ने मान्छे म हो, एमाले पार्टी हो।
फेरि आलोपालोको कुरा आएपछि एकता हुन्छ त? एउटै पार्टीबाट किन आलोपालो गर्नुपर्‍यो? भन्ने कुरा आइरहेका छन्।
यहाँ चलन के छ भन्दा राम्रो कुरा हुन लाग्यो भने राम्रो कुरा गर्न थाल्यौं ल स्याबास अगाडि बढ भन्ने चलन छैन। कहीँ कतै औंला घुसार्ने दुलो पो हो भन्ने जस्तो लाग्यो भने औंला घुसार्ने र त्यसलाई भत्काउने चलन छ हाम्रोमा। त्यसकारण यो विवादको विषय नै हैन। कसले कहाँ के भन्नुभयो म त्यतातिर खण्डन मण्डन गर्नेमा विश्वास गर्दिन। म के भन्छु भन्दा यी नेता बसेर एउटा निश्कर्ष निकाल्नुहुन्छ। त्यहीँ अनुसार अबको पाँच वर्ष चल्छ।